16 zavatra tokony hohajaina amin'ny fiainana - Blog
16 zavatra tokony hohajaina amin'ny fiainana
Inona no tianao?
Mety manandrana mamantatra ny filanao ianao mba hahitanao fahasambarana bebe kokoa amin'ny fiainana.
Na angamba heverinao fa hitranga amin'ny resadresaka asa ity ary manandrana mamorona valiny.
Angamba fanontaniana sarotra ho anao ny mamaly izao.
Angamba mahatsapa ianao fa tsy voatosika, malaindaina, na toa ny tombontsoanao iraisana dia very ny famirapiratan'izy ireo ao anaty korontana eo amin'ny fiainana?
Na inona na inona toe-javatra iainanao dia eto amin'ity pejy ity ianao no mitady zavatra mahazatra iraisana.
Ka ndao hotapahintsika. Ireto ny 16 amin'ireo filana malaza indrindra.
Ny biby sy ny biby fiompy dia fampialana aina ho an'ny olona maro be.
Tsy dia sarotra izy ireo, indrindra raha ampitahaina amin'ny fitetezana ny fahasahiranan'ny asa, ny fiainana, ny fifandraisana ary ny finamanana.
Ny biby dia somary tsotra ary manolotra fitiavana tsy misy fepetra, izay manentana ny fitiavan'ny biby sy ny biby fiompy.
Ny filan'ny biby dia mety hiparitaka amin'ny biby fiompinao manokana, milatsaka an-tsitrapo any amin'ny toeram-pialofana, mipetraka biby, mijery vorona, mandeha alika, na mipetraka fotsiny eo amin'ny zaridainan'alika ary mijery ireo biby milalao.
2. Ny tenanao
Handany ny andronao sisa ianao!
Ny fampiasam-bola ho an'ny tenanao, ny fanatsaranao tena, ary ny hoavinao amin'ny ho avy dia fampiasam-bola tsara foana.
Mazava ho azy fa izany dia mety ho mora kokoa noho izay natao ho an'ny olona maro. Ny zavatra rehetra manomboka amin'ny olan'ny fahasalamana ara-tsaina ka hatramin'ny aorin-dàlana ankapobeny amin'ny fiainana dia afaka manakana ny olona tsy hahita ny lanjan'izy ireo sy ny lanjan'izy ireo.
Ny fomba tsara iray hampipoitra ny firehetam-po ao aminao dia ny fanaovana zavatra mendrika hahatsapa ho tsara.
Manaova asa an-tsitrapo, ampio ny olona sendra olona, ​​na mahita fomba iray handraisany anjara tsara amin'ny tontolo miaraka amin'ilay fahaiza-manao anananao.
Ireto no zavatra azonao atao tsara amin'ny safidinao hatao, tsy ho an'ny hafa ihany, fa ho anao ihany.
manasonia bandy tia anao nefa atahorana
Betsaka ny fialamboly sy tombontsoa maro samihafa any mba handray anjara.
Ny fampivelarana ny filanao fialam-boly, indrindra ny fialamboly azonao zaraina amin'ny hafa, dia tena afaka manampy amin'ny fampiroboroboana ny fitiavana sy ny fahaiza-mamorona amin'ny faritra hafa amin'ny fiainanao.
Tsy izany ihany, fa ny olon-kafa dia mirona hamaly tsara ny filan-dratsy amin'ny fialam-boly, na dia tsy ny rehetra aza no liana amin'ny fialam-bolinao manokana.
Mahaliana ny mihaino olona mafana fo sy fahalalana be momba ny fialamboliny na ny fahalianany.
Ny fialamboly dia hita na aiza na aiza ary na aiza na aiza. Raha sendra misy ny fotoana mety dia andramo izany. Angamba maka kilasy fandihizana izy, mandinika knick-knacks azo angonina, na manandrana golf golf.
leo aho inona no azoko atao
Misafidiana zavatra, andramo!
Vitsy ny zavatra miteraka fientanam-po amin'ny olona toy ny zavakanto, na dia tsy voatery ho mpanakanto aza isika.
Misy zavatra holazaina momba ny hakanton'ny fahitana sangan'asa famoronana, na sary hosodoko, sary vongana, soratra na zavatra hafa foronin'ny olona iray amin'ny alàlan'ny fahitany sy ny ezak'izy ireo.
Mety ho toa zavatra miharihary ny zavakanto, saingy zava-dehibe ny fijerena ny fahitan'ny olona ny kanto. Tsy mila mahagaga ianao amin'ny zavatra noforoninao mba hamoronana zavatra. Tsy misy olona manomboka mahagaga amin'ny zavatra rehetra.
Na izany aza, betsaka ny olona manary ny ezaka ataon'izy ireo tahaka ny anombohany ny lalany satria tsy hitany hoe tsara na mora izany.
Raha mbola mahafaly anao izany dia izay ihany no tena zava-dehibe. Tsy mila mamokatra sanganasa ianao.
5. Manandratra ny hafa
Ny hatsaram-panahy dia fampiasam-bola izay mamaly dividends foana, tsy voatery ho avy any ivelany, fa ho fiadanan-tsaina sy fanahy.
Ny olona dia zavaboary ara-tsosialy ary mahazo tombony amin'ny fiaraha-monina isika. Amin'ny lafiny maro, izay avoaka amin'izao tontolo izao dia haverina amintsika amin'ny endritsika manokana filaminana anaty , fahasambarana, FIFALIANA , ary fiadanam-po.
Izany dia mahatonga ny fitomboan'ny filan'ny hafa ho lasa zavatra izay afaka manampy amin'ny fiadanan-tsaina sy ny toerantsika eo amin'ny fiainana.
Mampivelatra fahazarana mampitraka sy manampy ny hafa , na eo amin'ny fiainanao manokana izany na amin'ny alàlan'ny asa fiantrana miaraka amin'ny hafa, dia safidy lehibe.
Ny fitiavam-pianarana dia afaka manokatra varavarana maro ary manitatra ny faravodilanitrao.
Tsy ny fahalalana ny pitsopitsony sy antsipiriany foana momba ny zavatra farany na kely akory, ny fahalalana hoe aiza no hahitana ny valiny mety dia fahaizana lehibe hambolena koa.
Ny fianarana dia fanomezana izay manome tsy tapaka ho an'ilay olona mikolokolo sy mampitombo ny fahalalany.
Mifanaraka tsara amin'ny zavatra niainana koa ny fianarana. Zavatra iray ny mamaky boky na mihaino lahateny iray, fa ny tena mivoaka sy mandray anjara amin'ny hetsika vaovao izay nianaranao dia afaka manampy anao hihaona amin'ny olona vaovao ary hampivelatra fahatakarana lalindalina kokoa.
Ny fiainana dia milina sarotra misy andalana mihetsiketsika tsy manam-petra. Mampivelatra fientanam-po amin'ny fanatsorana dia afaka manampy amin'ny fitondrana ny zava-drehetra ho amin'ny fifantohana milamina kokoa.
Mazava ho azy fa tsy mora na vinavinaina foana ny fiainana. Ny zavatra dia hivoaka tsy ho aiza izay mety hisy fiatraikany amin'ny fiainanao na tsara na ratsy.
Afaka manampy ny fanatsorana ahenao ny adin-tsainao , manamora ny fandikana ny toe-javatra ary mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa amin'ny sehatra lehibe amin'ny ankapobeny.
Ny filam-panahy amin'ny fanatsorana dia tena manomboka amin'ny fanitsiana na fanesorana ireo ampahany mifangaro amin'ny fianan'ny tena.
Mety izany ny fifandraisana na fisakaizana izay nahavita ny diany, mitady asa tsy dia miady saina, na manalefaka entana maromaro fa tsy manana fampiasana marina intsony ianao.
8. Fahasalamana sy fahasalamana
Ny fitiavam-pahasalamana sy fahasalamana dia hampiroborobo ny fiainanao any aoriana.
Ny vatana dia masinina tsy maintsy karakaraina raha tiantsika hahavita tsara mandritra ny fotoana maharitra.
Ny fampivoarana ny filan'ny fahasalamana sy ny fahasalamana dia tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fahasalamana ara-batana fotsiny, fa manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fahasambarana amin'ny ankapobeny.
Ny toerana tsara hanombohana dia amin'ny alàlan'ny fakana hevitra amin'ny dokotera mba hahitana hoe inona no fomba tsara indrindra hanatsarana.
Hevitra tsara foana ny maka hevitra ara-pitsaboana alohan'ny hirosoana amin'ny fanovana lehibe eo amin'ny sakafo na manao fanazaran-tena vaovao.
9. Ny karieranao
Ny olona iray manana asa aman-draharaha manana hetaheta mafy amin'ny zavatra ataony, na zavatra manerantany na mahatalanjona, dia afaka mitondra fahasamihafana lehibe eo amin'izao tontolo izao sy ao anatin'ny indostrian'izy ireo.
Misy feo sy hevitra mafy miantsoantso ny maha-zava-dehibe ny fientanam-po sy ny fahasambarana amin'ny fananana asa, izay hafahafa, satria ny ankamaroantsika dia handany farafahakeliny ny fiainam-dehibe hiasana.
Ny fitadiavana fandriampahalemana, fahasambarana ary firehetam-po amin'ny asan'ny tena dia mety hahatonga ilay fotoana tsy hanahirana loatra.
Ary raha manana kariera tsy tianao ianao na tsy mahaliana anao dia angamba fotoana izao hanombohana mijery safidy hafa ary hijery ireo fotoana vaovao alohan'ny fialanao amin'ny asanao ary manomboka indray.
Betsaka ny lalana mankamin'ny fahombiazana sy ny fahasambarana. Tsy misy antony anerena ny tenanao ho iray fotsiny.
10. Ny fifandraisanao
Ireo olona andanianao ny fotoanao dia hisy fiatraikany lehibe indrindra amin'ny fiainanao.
Ka mandoa ny laharam-pahamehana amin'ny fanaovana ireo fifandraisana ireo ho salama araka izay azony atao amin'ny alàlan'ny fiasana amin'izy ireo.
Na ny mpiara-miasa aminao, ny fianakavianao, ny namanao, na ny mpiara-miasa aminao, ny fahatakarana ny fomba fiasan'ny fifandraisana tsirairay, ary ny zavatra azonao atao mba hampiroboroboana ny firindrana sy ny fikarakarana dia fitiavam-bola mendrika hivoatra.
Betsaka ny lafiny amin'ny fifandraisana, fa ny sasany amin'ireo lakileny ireo dia ny fahafantarana tsara kokoa ny olona iray sy ny fihetsiny, mitady ny fomba hananganana tena fifandraisana, ary ny fanaovana ny asa ilaina hitazomana ireo fatorana ireo.
Ny fanamboarana ny lalanao manokana eo amin'ny tontolon'ny asa sy ny orinasa dia mety ho fanamby sy manome valiny lehibe.
Ny fitiavanao dia tsy mila vola, fa ny manao zavatra tianao, mihaika ny tenanao ary miatrika risika voaisa.
Tsy mila mifantoka amin'ny orinasa mitady tombony akory ianao. Mpandraharaha betsaka ianao raha manomboka fiantrana fa tsy manangana orinasa.
Ny momba ny maha tompon'ny anjaranao manokana, ny famoronana, ny fahatapahan-kevitra ary ny fampifanarahana ny toe-javatra vaovao amin'ny fisainana amin'ny tongotrao.
12. Manao fiaraha-monina tsara kokoa
Miaina ao amin'ny tontolo tsy lavorary isika. Tsy misy isalasalana izany.
ny fomba hilaza raha misy lehilahy te anao firaisana ara-nofo
Saingy isika rehetra dia manana fahefana ao anatintsika hanatsara an'ity tontolo ity kely fotsiny.
Mety hiady amin'ny fahamarinana ara-tsosialy izany, miasa ho an'ny tontolo iainana, fanatsarana ny fifandraisan'ny fiaraha-monina, na zavatra hafa.
Na inona na inona endrik'izany, ny fientanam-po amin'ny fanatsarana ankapobeny ny tontolo iainantsika dia tena mendrika tokoa.
Efa niresaka momba ny fianarana izahay, saingy avadiho izany ary ho hitanao fa ny fampianarana ny olona zavatra tsy fantany amin'izao fotoana izao dia mety ho zavatra iray hafa mahaliana.
Tsy mila mpampianatra tena izy ianao any am-pianarana hampianarana zavatra ny olona.
Mety ho mpitantana manampy ny mpiasa hampivelatra ny talentany ianao.
Mety ho ray aman-dreny mampianatra ny zanakao amin'ny fomba maro samihafa ianao.
Mety ho mafana fo ianao hampianatra ny olona ny maha-zava-dehibe ny antony inoanao.
Ny fizarana fahalalana sy fanampiana ny olona hitombo dia valiny manokana.
14. Ny Finoanao
Raha zava-dehibe aminao ny zavatra inoanao, azo antoka fa azo heverina ho filana izany.
Angamba ianao mandray anjara amin'ny fomba ara-pinoana, mandany fotoana amin'ny vavaka na fandinihana, na miaraka amin'ny fiarahamonina omen'ny finoanao.
Rehefa manao zavatra mifanaraka amin'ny zavatra inoanareo ianao dia mampiseho fa tia azy ianao.
15. Mandray andraikitra
Ny fahaizana mandray andraikitra no mitarika fiovana tsara amin'ny fiainam-bahoaka.
Ny firariana, ny hevitra ary ny aingam-panahy dia mora sy ambany avokoa. Ny fahombiazana amin'ny zavatra rehetra dia mankany amin'ireo olona misafidy ny handray andraikitra sy hiasa amin'ny tanjony.
Ny fanoloran-tena sy ny fifehezana no mahatonga ny olona handroso amin'ny fotoana ambany rehefa miahiahy ny tenany na ny lalany izy ireo.
Ny fanahiana sy ny tahotra dia manjavona amin'ny fihetsika, satria mahazo traikefa ianao ary manangana fahatokisan-tena amin'ny fahaizanao miatrika ireo zavatra eo alohanao.
Tsy misy filana lehibe manandanja kokoa amin'ny fiainana raha tsy ny iray amin'ny fandraisana andraikitra. Ny hetsika no mitarika amin'ny asa mahomby tsirairay, na izany fampandrosoana manokana na matihanina.
ny fomba fanitsiana lolom-po amin'ny fifandraisana
Ary tena mora ny manomboka! Ny mila ataonao dia ny misafidy ny hanao ilay asa.
Angamba ny zavatra farany tokony hohafanaina dia ny fiainana mihitsy.
Mety hidika ho zavatra samy hafa amin'ny olona samy hafa izany.
Angamba mampihatra ny fahatsiarovan-tena ianao mba hahafahanao maka isan'andro sy isaky ny misy azy.
Angamba mitady hiaina zava-baovao ianao ary hanitatra ny faravodilanitra.
Azonao atao ny misaintsaina ireo fanontaniana lehibe momba ny fiainana sy izao rehetra izao hahafantarana bebe kokoa ny toerana misy anao eto amin'izao tontolo izao.
Na inona na inona tianao indrindra - ankehitriny sy amin'ny ho avy - aza menatra amin'izany.
Betsaka ny olona no menatra manambara ny tena filany satria matahotra sao ho voamarika ho mankaleo na adala izy ireo.
Fa raha zava-dehibe aminao izy ireo dia izay ihany no tokony ho zava-dehibe.
Raha tsy manana fiheverana na inona na inona ianao dia vakio ity
Inona no tokony hataonao amin'ny fiainanao? Torohevitra tena izy 170.
Loharano 20 amin'ny aingam-panahy hampiakarana ny haavon'ny angovo isan'andro
Mila fialam-boly vaovao? 13 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t hahitana olona mifanaraka aminao
shawn michaels miala tsiny fa tiako ianao
zava-misy mahafinaritra hizara momba anao any am-piasana
ny fomba hampiatoana ny fiankinan-doha amin'ny fifandraisanay amin'ny fifandraisako